Midawga Afrika oo taageeray go’aanka xilka lagaga qaaday Guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya | Berberanews.com
Home WARARKA Midawga Afrika oo taageeray go’aanka xilka lagaga qaaday Guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya
Muqdisho-(Berberanews)- Mudanayaal ka tirsan Xildhibaannada xilka ka qaaday Guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, ayaa sheegay inay Warqad qoraal ah oo lagu taageerayo go’aankooda ay ka heleen Ururka Midowga Afrika, isla markaana ay ku faraxsan yihiin in loo arko go’aankooda mid sharci ah.
Xildhibaan Maxamed Xuseen (Ilko-Dahab) oo ka mid ah Mudanayaasha xilka qaadista sameeyey badhtamihii bishan maanta dhammaadka ah December, ayaa Wariyayaasha shalay kula hadlay magaalada Muqdisho, isla markaana uga warramay in qoraalka ay heleen uu qeexayo inuu shirarka Baarlamanka guddoomiyo Guddoomiye ku-xigeenka labaad, sidoo kalena ay howluhu sidoodii hore u socdaan.
“Waxaan shacabka Soomaliyeed u xaqiijinaynaa in go’aankeennii aan taageero uga helnay beesha caalamka, gaar ahaa Midowga Afrika, waxaana lagu yidhi qoraalka in doorashadii dhacday 13-kii bishan ay tahay mid sharci ah, Guddoomiyihii horena uu noqonayo Xildhibaan ka tirsan Barlamanka.” Sidaa ayuu yidhi Xildhibaan Ilko-Dahab.
Sidoo kale, Xildhibaanku wuxuu sheegay in qoraalkan nuqullo ka mid ah loo gudbiyay Madaxweynaha Soomaaliya, Wasiirka arrimaha gudaha iyo Taliyaha Ciidanka AMISOM, kaasoo uu xusay inuu ku saxeexnaa Ergayga Midowga Afrika u qaabbilsan arrimaha Soomaaliya, Danjire Abubakar Diarra.
Inkastoo aanu jirin hadal kasoo baxay dhinac kale iyo Guddoomiyihii xilka laga qaaday ee Barlamanka ayaa haddana wuxuu sheegay in laga codsaday qoraalka inay ugu yeedhaan xubnaha kale ee Barlamanka kulammada la qabanayo maalmaha soo socda.
Previous articleForced returnees from Holland–Not acceptable by Somaliland Government-
Next articleKhasaare Dhimasho iyo Dhaawac isugu jira oo ka dhashay hawlgal ay Ciidanka Qaranka Somaliland fuliyeen